KIO ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး COVID-19. ပိုးရှိ လူနာ ၄ ဦးတိုး – Network Media Group
ကခငျြလှတျလပျရေးအဖှဲ့ KIO ထိနျးခြုပျနယျမွေ လိုငျဇာတှငျ အင်ျဂါနေ့ တဈရကျတညျးတှငျ COVID-19 အတညျပွုလူနာ ၄ ဦး ထပျတိုးသညျဟု KIO ၏ COVID-19 ရောဂါတားဆီးနှိမျနှငျးရေး ကျောမတီထံမှ သိရ သညျ။
ဇူလိုငျ ၆ ရကျနေ့ (ယမနျနေ့) က လိုငျဇာမွို့အတှငျး ဝငျရောကျလာသူမြားထဲမှာ အတညျပွုလူနာ ၄ ဦးရှိခဲ့ရာ မတျ လမှ ယခုဇူလိုငျလ ပထမအပတျအထိ လိုငျဇာမွို့တှငျ အတညျပွုလူနာ အယောကျ ၂၀ ရှိသှားပွီဟု KIO COVID-19 ရောဂါတားဆီးနှိမျနှငျးရေး ကျောမတီ အတှငျးရေးမှူး ဗိုလျမှူးကွီး လဖိုငျဟိနျးဝေါမျ က ပွောသညျ။
“မနကေ့ တိုးတာတှေ တခြို့ရှိတယျ။ နဂိုက မရှိသလောကျဖွဈသှားတာ၊ နဂို positive တှလေညျး ပြောကျ ကငျးသှားသလောကျရှိပွီ၊ အခု မနကေ့ တခြို့ ပွနျတိုးလာတယျ။ လေးယောကျလားမသိ တိုးလာတယျ။ သူတို့ ကနျြးမာ ရေး အခွအေနကေောငျးပါတယျ။ အားလုံး လူငယျ လူလတျပိုငျးတှပေဲ၊ အသကျ ၂၀ ကြျော၊ ၃၀ ဝနျး ကငျြ အဲ့လောကျအရှယျတှဖွေဈတယျ။ လောလောဆယျ လိုငျဇာမှာပဲဗြ။ အရငျ ၁၃ ယောကျရယျ၊ နောကျ ၃ ယောကျရယျ၊ အခု ထပျတိုးတဲ့ ၄ယောကျရယျပေါ့၊ အယောကျ ၂၀ လောကျရှိသှားပွီ။ အခုလောလောဆယျ ၅ ယောကျပေါ့ ဆေးရုံတကျနတောက” ဟု ပွောသညျ။
COVID-19 အတညျပွု လူနာ ၂၀ ရှိသညျ့အနကျ လကျရှိ ဆေးရုံတှငျ ၅ ဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနရေပွီး၊ လကျရှိတှငျ ရောဂါ ကူးစကျမှုနှုနျးကို ထိနျးခြုပျထားနိုငျသညျဟု KIO က ပွောသညျ။
ယခု ထပျတိုးလာသညျ့ COVID-19 အတညျပွုလူနာမြားသညျ လိုငျဇာဒသေခံမြားမဟုတျပဲ လကျရှိဖွဈပျေါနေ သညျ့ နိုငျငံရေးအခွအေနကွေောငျ့ လုံခွုံရေး စိတျခမြှုမရှိသညျ့အခွအေနနှေငျ့ ကွုံနရေသညျ့ အခွားဒသေမှ ဝငျ ရောကျလာသူမြား ဖွဈသညျဟု သိရသညျ။
“အဝေးကလူတှပေါ။ ကခငျြပွညျကတောငျ မဟုတျဘူး။ တခွားကလူတှပေါ။ ကနြျောတို့က လမျးပိတျတာက ၄ ရကျနကေ့နေ ပိတျပွီ။ သူတို့ကလညျး နညျးနညျးအရေးတကွီးဖွဈတယျ ဆို တော့ သူတို့ကို ပွနျသှငျးလိုကျတော့ အဲ့လိုဖွဈသှားတာပါ။ အခု ကနြျောတို့ ပိတျပွီ အခုတော့ လူမဝငျအောငျ လုံးဝပိတျထားတယျ။ သူတို့က ဟိုဘကျ လညျး ပွနျလို့မရ။ ဟိုဘကျမှာလညျး နမေယျ့နရော မရှိဆိုတော့ ဘာပဲဖွဈ ဖွဈ ကနြျောတို့ဘာပဲဖွဈဖွဈ Quarantine ထားမယျဆိုတဲ့ ရညျရှယျခကျြနဲ့ ဝငျခိုငျးလိုကျတာ သူတို့အဖှဲ့ထဲမှာ positive တှေ ပါလာတာ ဖွဈတယျ” ဟု ဗိုလျမှူးကွီး လဖိုငျဟိနျးဝေါမျ က ပွောသညျ။
KIO/KIA အနဖွေငျ့ ၎င်းငျးတို့၏ ထိနျးခြုပျနယျမွအေတှငျး COVID-19 ရောဂါ ကာကှယျထိနျးခြုပျနိုငျရေးအတှကျ အဝငျအထှကျဂိတျမြားကို ပိတျထားသျောလညျး စဈတပျက အာဏာသိမျးပွီးနောကျ ကွုံနရေသညျ့ လုံခွုံရေး အခကျအခဲကွောငျ့ ထှကျပွေးလာသူ အခြို့ဝငျရောကျလာမှုမြား ရှိနရော ယခုကူးစကျမှုသညျ အဆိုပါ ကိစ်စရပျ မြားနှငျ့ ဆကျစပျနသေူမြား ဖွဈသညျ။
COVID-19 အတညျပွုလူနာမြားအား သီးသနျ့ သတျမှတျထားသညျ့နရောတှငျ သီးသနျ့စောငျ့ကွညျ့မှု Quarantine ထားပွီး ဆေးကုသမှု ပေးထားသညျဟု သိရသညျ။
ဗိုလျမှူးကွီး လဖိုငျဟိနျးဝေါမျ က “ကနြျောတို့ဆီမှာ တဈခုခုဖွဈပွီဆိုရငျတော့ အရေးတကွီးဆောငျရှကျစရာတှေ ကို ဆောငျရှကျရမှာဖွဈပါတယျ။ အခုက လူတှကေ အပွငျဘကျမှာပဲ အတှငျးထဲမရောကျသေး ဘူးဆိုတော့ နညျး နညျးအခွအေနကေ လောလောဆယျမှာ ငွိမျနပေါသေးတယျ” ဟု ပွောသညျ။
KIO/KIA ၏ အခွား ထိနျးခြုပျနယျမွတေဈခုဖွဈသညျ့ မိုငျဂြာယနျအနီးက လှယျဂယျြမွို့တှငျလညျး COVID-19 အတညျပွုလူနာ ယခုရကျပိုငျးတှငျ ၅ ယောကျ ရှိနပွေီဆိုသညျ့ သတငျးမြားရရှိထားသညျ့အတှကျ ၎င်းငျးတို့ဒသေ အတှငျး ကူးစကျမှုမြား မရှိအောငျ စညျးမဉျြးစညျးကမျးမြား တငျးကွပျထားပွီး အဝငျအထှကျ ဂိတျကိုလညျး လုံးဝပိတျလိုကျပွီဟု သိရသညျ။
၂၀၂၀ ခုနှဈ တဈနှဈပတျလုံးနှငျ့ ၂၀၂၁ ခုနှဈ စဈအာဏာမသိမျးခငျကာလအထိ KIO ထိနျးခြုပျနယျမွေ အတှငျး COVID-19 ကူးစကျမှုမြား မရှိခဲ့သျောလညျး ယခုနှဈ မတျလခနျ့မှစတငျ၍ ယခု ဇူလိုငျလ ပထမအပတျအထိ ဝငျရောကျလာသူမြားထဲမှ ရောဂါ ကူးစကျခံရသူမြားရှိခဲ့ခွငျး ဖွဈသညျ။
KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း COVID-19. ပိုးရှိ လူနာ ၄ ဦးတိုး
ကချင်လွတ်လပ်ရေးအဖွဲ့ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ လိုင်ဇာတွင် အင်္ဂါနေ့ တစ်ရက်တည်းတွင် COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ၄ ဦး ထပ်တိုးသည်ဟု KIO ၏ COVID-19 ရောဂါတားဆီးနှိမ်နှင်းရေး ကော်မတီထံမှ သိရ သည်။
ဇူလိုင် ၆ ရက်နေ့ (ယမန်နေ့) က လိုင်ဇာမြို့အတွင်း ဝင်ရောက်လာသူများထဲမှာ အတည်ပြုလူနာ ၄ ဦးရှိခဲ့ရာ မတ် လမှ ယခုဇူလိုင်လ ပထမအပတ်အထိ လိုင်ဇာမြို့တွင် အတည်ပြုလူနာ အယောက် ၂၀ ရှိသွားပြီဟု KIO COVID-19 ရောဂါတားဆီးနှိမ်နှင်းရေး ကော်မတီ အတွင်းရေးမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်ဟိန်းဝေါမ် က ပြောသည်။
“မနေ့က တိုးတာတွေ တချို့ရှိတယ်။ နဂိုက မရှိသလောက်ဖြစ်သွားတာ၊ နဂို positive တွေလည်း ပျောက် ကင်းသွားသလောက်ရှိပြီ၊ အခု မနေ့က တချို့ ပြန်တိုးလာတယ်။ လေးယောက်လားမသိ တိုးလာတယ်။ သူတို့ ကျန်းမာ ရေး အခြေအနေကောင်းပါတယ်။ အားလုံး လူငယ် လူလတ်ပိုင်းတွေပဲ၊ အသက် ၂၀ ကျော်၊ ၃၀ ဝန်း ကျင် အဲ့လောက်အရွယ်တွေဖြစ်တယ်။ လောလောဆယ် လိုင်ဇာမှာပဲဗျ။ အရင် ၁၃ ယောက်ရယ်၊ နောက် ၃ ယောက်ရယ်၊ အခု ထပ်တိုးတဲ့ ၄ယောက်ရယ်ပေါ့၊ အယောက် ၂၀ လောက်ရှိသွားပြီ။ အခုလောလောဆယ် ၅ ယောက်ပေါ့ ဆေးရုံတက်နေတာက” ဟု ပြောသည်။
COVID-19 အတည်ပြု လူနာ ၂၀ ရှိသည့်အနက် လက်ရှိ ဆေးရုံတွင် ၅ ဦး ဆေးကုသမှု ခံယူနေရပြီး၊ လက်ရှိတွင် ရောဂါ ကူးစက်မှုနှုန်းကို ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သည်ဟု KIO က ပြောသည်။
ယခု ထပ်တိုးလာသည့် COVID-19 အတည်ပြုလူနာများသည် လိုင်ဇာဒေသခံများမဟုတ်ပဲ လက်ရှိဖြစ်ပေါ်နေ သည့် နိုင်ငံရေးအခြေအနေကြောင့် လုံခြုံရေး စိတ်ချမှုမရှိသည့်အခြေအနေနှင့် ကြုံနေရသည့် အခြားဒေသမှ ဝင် ရောက်လာသူများ ဖြစ်သည်ဟု သိရသည်။
“အဝေးကလူတွေပါ။ ကချင်ပြည်ကတောင် မဟုတ်ဘူး။ တခြားကလူတွေပါ။ ကျနော်တို့က လမ်းပိတ်တာက ၄ ရက်နေ့ကနေ ပိတ်ပြီ။ သူတို့ကလည်း နည်းနည်းအရေးတကြီးဖြစ်တယ် ဆို တော့ သူတို့ကို ပြန်သွင်းလိုက်တော့ အဲ့လိုဖြစ်သွားတာပါ။ အခု ကျနော်တို့ ပိတ်ပြီ အခုတော့ လူမဝင်အောင် လုံးဝပိတ်ထားတယ်။ သူတို့က ဟိုဘက် လည်း ပြန်လို့မရ။ ဟိုဘက်မှာလည်း နေမယ့်နေရာ မရှိဆိုတော့ ဘာပဲဖြစ် ဖြစ် ကျနော်တို့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် Quarantine ထားမယ်ဆိုတဲ့ ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ ဝင်ခိုင်းလိုက်တာ သူတို့အဖွဲ့ထဲမှာ positive တွေ ပါလာတာ ဖြစ် တယ်” ဟု ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်ဟိန်းဝေါမ် က ပြောသည်။
KIO/KIA အနေဖြင့် ၎င်းတို့၏ ထိန်းချုပ်နယ်မြေအတွင်း COVID-19 ရောဂါ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်နိုင်ရေးအတွက် အဝင်အထွက်ဂိတ်များကို ပိတ်ထားသော်လည်း စစ်တပ်က အာဏာသိမ်းပြီးနောက် ကြုံနေရသည့် လုံခြုံရေး အခက်အခဲကြောင့် ထွက်ပြေးလာသူ အချို့ဝင်ရောက်လာမှုများ ရှိနေရာ ယခုကူးစက်မှုသည် အဆိုပါ ကိစ္စရပ် များနှင့် ဆက်စပ်နေသူများ ဖြစ်သည်။
COVID-19 အတည်ပြုလူနာများအား သီးသန့် သတ်မှတ်ထားသည့်နေရာတွင် သီးသန့်စောင့်ကြည့်မှု Quarantine ထားပြီး ဆေးကုသမှု ပေးထားသည်ဟု သိရသည်။
ဗိုလ်မှူးကြီး လဖိုင်ဟိန်းဝေါမ် က “ကျနော်တို့ဆီမှာ တစ်ခုခုဖြစ်ပြီဆိုရင်တော့ အရေးတကြီးဆောင်ရွက်စရာတွေ ကို ဆောင်ရွက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ အခုက လူတွေက အပြင်ဘက်မှာပဲ အတွင်းထဲမရောက်သေး ဘူးဆိုတော့ နည်း နည်းအခြေအနေက လောလောဆယ်မှာ ငြိမ်နေပါသေးတယ်” ဟု ပြောသည်။
KIO/KIA ၏ အခြား ထိန်းချုပ်နယ်မြေတစ်ခုဖြစ်သည့် မိုင်ဂျာယန်အနီးက လွယ်ဂျယ်မြို့တွင်လည်း COVID-19 အတည်ပြုလူနာ ယခုရက်ပိုင်းတွင် ၅ ယောက် ရှိနေပြီဆိုသည့် သတင်းများရရှိထားသည့်အတွက် ၎င်းတို့ဒေသ အတွင်း ကူးစက်မှုများ မရှိအောင် စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများ တင်းကြပ်ထားပြီး အဝင်အထွက် ဂိတ်ကိုလည်း လုံးဝပိတ်လိုက်ပြီဟု သိရသည်။
၂၀၂၀ ခုနှစ် တစ်နှစ်ပတ်လုံးနှင့် ၂၀၂၁ ခုနှစ် စစ်အာဏာမသိမ်းခင်ကာလအထိ KIO ထိန်းချုပ်နယ်မြေ အတွင်း COVID-19 ကူးစက်မှုများ မရှိခဲ့သော်လည်း ယခုနှစ် မတ်လခန့်မှစတင်၍ ယခု ဇူလိုင်လ ပထမအပတ်အထိ ဝင်ရောက်လာသူများထဲမှ ရောဂါ ကူးစက်ခံရသူများရှိခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်။